Nzira dzepamusoro dzekutamisa Mari Zvakachengeteka Online
Nzira yekuwana chikwereti chebhizimisi?
by SND Team 3 week ago 3 week ago
Chii Vanoda Vakadzi Vanoshanda uye Nzira Yokuvachengeta
Vakadzi vanoshanda chinhu chakakosha kune chero kambani. Vakazviratidza nguva nenguva sevashandi vakavimbika, vakazvipira, uye vanoshanda nesimba. Nekudaro, makambani ...
17 Nzvimbo Dzakanyanya Kuzivikanwa dzekutenga uye Kutengesa Instagram Accounts
Nzvimbo yezvemagariro evanhu yave ichikura zvikuru kubvira 2015. Kutanga ne Facebook uye ikozvino Instagram, mapuratifomu aya ane hombe yepamwedzi inoshandiswa mushandisi base. ...
by Purity Muriuki 1 mwedzi kare 1 mwedzi kare
Iwe unogona kunge wakambosangana nezwi rekuti malware pamberi asi pamwe hauna kumbofunga zvakanyanya. Chero paine antivirus program yakaiswa pa...
Zvishandiso zveHR Zvingabatsira Sei Bhizinesi Rako? Heino Mhinduro
Zvishandiso zveHR zvine huwandu hwakasiyana hwekushandisa uye ndiwo mhinduro dzetekinoroji dzinogona kukubatsira iwe kubata bhizinesi rako zviri nani uye kupa kune rako ...
Tsika yechiSpanish yokumbozorora yakanaka here?
Takaisa patafura imwe yenyaya dzakanyanya kuoma kubata nadzo mundima yeSpanish. Iro hope shoma mushure mekudya kwemasikati, izvo muzviitiko zvakawanda ...
Maitiro ekushandisa social media kukura purofiti yekambani yako?
Kuita webhusaiti yekambani hakuchakwane. Kana iwe uchida kusvika kune vako vangangove vatengi unofanirwawo kuve nehupo hunoshanda pasocial...
Foni kana piritsi remadzisekuru?
Kunyangwe zvikaita sezviri nyore pakutanga pakuona, kuwana chipo chakakodzera kune vanasekuru kunogona kuve kwakaoma. Muchokwadi, Evha yako yeGore Idzva inofanirwa...
by SND Team 3 ago 3 ago
Pamusoro 5 Bulk WhatsApp Sender Zvishandiso zveKushambadza
WhatsApp yave iyo yepamusoro-inoita meseji app uye yechipiri inonyanya kushandiswa chikuva mushure meFacebook. Vashandisi vayo vanotumira mameseji anopfuura mabhiriyoni zana zuva rega rega mu ...
by Purity Muriuki 3 ago 3 ago
Best Brand's Strategy: Facebook vs. Instagram kana Zvose
Facebook ine vanenge 2.91 bhiriyoni pamwedzi vanoshandisa vashandisi, nepo Instagram inosvika bhiriyoni imwe. Izvi zvinovaita mamwe eanopisa social media network. Zvavo...
Kwebasa Feedback Tsika: Maitiro Ekufamba Nekutsoropodzwa Kubasa
Kubata kushoropodzwa semushandi kwakakosha, asi idambudziko rakakura kune vanhu vazhinji. Iwe unowanzo kunzwa mamwe mazano ane zvikonzero zvakanaka uye ...
7 Akasiyana Mazano kune Yako Instagram Nhau
Mamirioni avanhu anotumira pa Instagram zuva nezuva. Uyezve, vazhinji vevashandisi pa Instagram vanowana kufarira kwakawanda muchigadzirwa chako kana mhando mushure mekuona Instagram ...
by SND Team 4 ago 1 mwedzi kare
Social Media, IweTubers
20 Zvakanakisa Zvishandiso Kukurisa Yako YouTube Channel muna 2022
YouTube iri kukurumidza kuita yakakurumbira social media chiteshi kutenderera pasirese. Chaizvoizvo, iyi online vhidhiyo-yekugovera chikuva ine vanopfuura mabhiriyoni maviri evashandisi vanoshanda. Zvakare, iyo ...
by Purity Muriuki 4 ago 4 ago